Isikhululo senqwelomoya saseBudapest siphinde sanxibelelana neCroatia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Isikhululo senqwelomoya saseBudapest siphinde sanxibelelana neCroatia
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziseCroatia • IHungary Iindaba eziPhulayo • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Isikhululo senqwelomoya saseBudapest siqinisekisile ukuba siza kuphinda sidityaniswe neCroatia ehlotyeni emva kweminyaka eli-13. Yazisa ngenkonzo yeRyanair yamaxesha athile eZadar, isixeko esilikomkhulu laseHungary siza kunika ikhonkco eliphindwe kabini-ngeveki kunxweme lwaseDalmatia nge-2 kaJulayi.
"Ukwazisa kwakhona iCroatia kwinethiwekhi yethu njengeendaba ezimnandi, ngakumbi kwezokhenketho kwezi zixeko zombini - ngaphezulu kwesiqingatha sesigidi samaHungary batyelele ilizwe elisemazantsi mpuma yeYurophu kunyaka ophelileyo," ucacisa uBalázs Bogáts, iNtloko yoPhuhliso lweeNqwelo moya, Isikhululo senqwelomoya saseBudapest. “Isixeko esinembali yaseZadar kunye nedolophu yakudala yamabhodlo aseRoma, iicawa zamaxesha aphakathi kunye neefestile ezinabantu abaninzi ibingumtsalane okhulayo kubantu baseHungary iminyaka emininzi ngoku sibuye silibone inani labakhenkethi baseCroatia besiza kwisixeko sethu esihle sikhula ngokubonakalayo. Ukubhabha eRyanair phakathi kwezi ndawo zimbini zabakhenkethi ngaphandle kwamathandabuzo kuzakufuneka kakhulu kulo lonke ihlobo, ”wongeze watsho uBogáts.
Ukuqalisa ishedyuli yayo yehlobo, Ryanair izakusebenzisa indlela esuka kwisiseko sayo esitsha seLauda - inkampani enexabiso eliphantsi (LCC) yenkxaso- eZadar. Inikezela ngezihlalo ezongezelelekileyo ezingama-300K ngexesha lonyaka eliphakamileyo, i-LCC yase-Ireland yenye yeenqwelo moya ezikhula ngokukhawuleza kwisikhululo senqwelomoya saseBudapest ngeli xesha zineendawo ezingama-58 kwinethiwekhi yayo yaseHungary.